ရန်ကုန် | မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ မှ အင်ဂျင်နီယာ နှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်များ | MyJobs
Result page 1 for ရန်ကုန် ရှိ မှ အင်ဂျင်နီယာ နှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်များ
အလုပ် 19 ခုကို တွေ့ရှိပါတယ်။
M&E Engineer (Plumbing & Sanitary)
Plumbing & Sanitary Installation work.
QC Engineer (Steel Fabrication Factory)
QC Engineer for Steel Fabrication Factory.
အင်ဂျင်နီယာ နှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်များ 19
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း9ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်း 1 ဟိုတယ်နှင့်ပတ်သက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း 1 နည်းပညာနှင့် ဆက်သွယ်‌ရေးလုပ်ငန်း2ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် သိုလှောင်လုပ်ငန်း4လက်လီးအရောင်း /အ၀ယ်လုပ်ငန်း၊ ဖက်ရှင် နှင့် လူသုံးကုန် စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်း 2
စာချုပ်ဖြင့်လုပ်ကိုင်နိုင်သေ3အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား 16